प्रचण्डले राष्ट्रपति हुन किन चाहेनन् ? (अन्तर्वार्ता) - Enepalese.com
प्रचण्डले राष्ट्रपति हुन किन चाहेनन् ? (अन्तर्वार्ता)
इनेप्लिज २०७२ जेठ २८ गते ९:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २८ जेठ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालका लागि राष्ट्रपति पद अस्वीकार गरेका छन् । बीबीसी नेपाली सेवाका लागि बुधबार साँझ रविन्द्र मिश्रसँग कुराकानी गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अझै ७/८ वर्ष सक्रिय राजनीतिक जीवन निर्वाह गर्ने बताए ।
‘अहिले यही अवस्था, यही उमेर र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा मेरो ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपति हुने इच्छा छैन।,’ उनले भने, ‘आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा अडान राख्ने अनि संवैधानिक राष्ट्रपति हुन जाने भन्ने मिल्दै मिल्दैन।’
अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र काँग्रेसबाट राष्ट्रपति हुन प्रस्ताव समेत गरे । प्रस्तुत छ एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बिबिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तर तपाईँहरु ६०१ जनाले गर्न नसकेको कामको भारी एउटा आयोगलाई बोकाइ दिन चाहनु भयो। त्यो आयोगमा पनि तपाईँहरुले भोलि भागबण्डा गरेर सदस्य नियुक्त गर्नुहुन्छ। अनि आफूआफूले नियुक्त गरेका सदस्यलाई ‘यो अडान राख्नु है’ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसले तयार गर्ने प्रतिवेदन चाहिँ तपाईँहरुलाई कसरी मान्य हुन्छ?
तपाईँको यो प्रश्नमा अलिकति पूर्वाग्रहको गन्ध आएको जस्तो लाग्यो मलाई चाँहि।
आयोगको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था तपाईँहरुले गर्नु भा’छ। तपाईँको कुरा गर्दा, पहिला तपाईँले एउटा कुरा मान्छु भन्नुहुन्छ पछि मान्नु हुन्न। चुनावी घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पनि त्यस्तै भयो। पछि आयोगको प्रतिवेदन तपाईँहरुले चाहे जस्तो आएन र त्यो दुई तिहाइबाट पारित हुने स्थिति आयो भने स्वीकार्नु हुन्छ कि हुन्न?
हेर्नुस, हामी नीतिगत, सैद्धान्तिक या जनताको अगाडि सार्वजनिक रुपमा हामी त्यसमा अडिन्छौं। यो कुरा पुष्टि भइनै सक्या’छ।
तपाईँहरुले केही समय अगाडि मात्रै केपी ओलीले मानसिक सन्तुलन गुमाएको र उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा भएको लिखित रुपमै भन्नु भयो तर त्यही व्यक्तिसँग अहिले निकटको सहवास भइरा’छ?
तर कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि त कार्यकारी अधिकार नै चाहिन्छ, नेता भएर मात्रै त गर्न सकिँदैन?
अहिले छैन। अहिले यही अवस्था, यही उमेर र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा मेरो ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपति हुने इच्छा छैन।
फेरि पछि मैले अन्तर्वार्ता लिन आउँदा तपाईँले ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपति हुने इच्छा थिएन अहिले त हुनु भयो नि भन्नुपर्ने स्थिति आउने हो कि?
मैले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई कम गर्न यसो भनेकै छैन। हाम्रो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा हो। अहिले पनि त्यो विषयमा हाम्रो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहन्छ। त्यसकारण पनि नैतिक रुपले मैले अहिले त्यो अडान छोड्नेवाला छैन। आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा अडान राख्ने अनि संवैधानिक राष्ट्रपति हुन जाने भन्ने मिल्दै मिल्दैन।